जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तोकियो
रमेश लम्साल, प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २५ सोमबार , १,८६९ पटक हेरिएको
काठमाडौँ। सरकारले जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) दर सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको प्रकृति हेरी सबैभन्दा बढी प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म पिपिए दर तोकिएको जानकारी दिए ।
जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न चाहनेले सोमबार सार्वजनिक गरिएको दरका आधारमा १७ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । तय गरिएको पिपिए दर १० हजार मेगावाटका आयोजनासम्मका लागि मात्रै लागू हुने उनको भनाइ छ । १० हजार मेगावाट निर्माण भएपछि यसको दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
‘‘सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर यसलाई नै आधार मूल्य बनाएका हौँ’’, मन्त्री शर्माले भने – “यो दरमा पछि आवश्यक भए परिमार्जन पनि हुन सक्छ ।”
समितिले छ-छ महिनाका लागि आधार मानेर जलाशयको बिजुली खरिद बिक्री दर तोकेको थियो । मङ्सिर १५ देखि जेठ १६ सम्म छ महिनालाई सुख्खायाममा बढी पिपिए दर तय गरिएको छ । भने जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मलाई वर्षात् मानेर कम दर तय गरिएको छ ।
समितिले अर्धजलाशय आयोजनाको ऊर्जाको मूल्य पनि तोकेको छ । जसअनुसार मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ गतेसम्म प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको मन्त्री शर्माले बताए।
विद्युत् उत्पादन भएर हुन्छ र ? बिजुली दिनु पर्दैन ? छेवैका बस्तीमा टुकी !
१७ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति, ७४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
राजधानीमै संगठित रुपमा विद्युत् चोरी, ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने तयारीमा प्राधिकरण
नेपाल-चीनबीच विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने
पाँचसय मेगावाटको विद्युत् निर्माणमा पहल गर्ने नगर प्रमुखको घोषणा
रसुवागढीले एक अर्ब बढीको साधारण शेयर जारी गर्ने